Tanàna mahafinaritra ao Toledo: Avy any Escalona ka hatrany La Puebla de Montalbán | News Travel
Tanàna tsara tarehy any Toledo
Raha mandinika ny dia mamakivaky ny tanàna tsara tarehy any Toledo, tsy maintsy hisafidy isika satria maro. Ity faritany Castilian an'i La Mancha ity dia manana toetra manokana anjakan'ny Montes de Toledo ary ny Reniranon'i Tagus sy Tiétar, izay miafara amin'ny voalohany.
Saingy, ambonin'ny zava-drehetra, ny lemak'i Toledo dia manana tanàna tsara tarehy feno tantara sy tsangambato. Toy izany koa, manana landscapes amin`ny lalina literatiora fakany, satria tsy tokony hohadinoinao fa ny tsy manam-paharoa Don Quixote niaina ny maro tamin’ireo zavatra niainany tany amin’ireo tany ireo. Izany rehetra izany dia manamboatra faritany tokony ho fantatrao tsara. Mba hanananao mpitari-dalana, dia hasehontsika anao ireo tanàna tsara tarehy nofidinay Toledo.
1 Ny Puebla de Montalban
2 Orgaz, iray amin'ireo tanàna tsara tarehy ao Toledo
3 Ocaña sy ny Plaza Ben'ny tanàna tsara tarehy
5 Escalona, ​​​​eo amoron'ny Alberche
Ny Puebla de Montalban
Plaza Ben'ny tanànan'i La Puebla de Montalbán
Raha resonance ara-literatiora no resahina, dia io tanàna io no fototry ny Ferdinand de Rojas, mpanoratra an'ny Celestine. An'ny faritra Torrijos, saika eo afovoan’ilay faritany, ary hatrany amin’ny lohasaha lonaka ao Tagus.
Fa ny La Puebla dia miavaka amin'ny lova lehibe lehibe. Satria ny foibe nerve dia ny Majistra Plaza, matetika Castilian, izay ahitanao ny Fiangonan'ny Tompon'ny fiadanantsika, izay tetezamita Gothic ho Renaissance. Ho hitanao ao amin'ny kianja ihany koa ny tranoben'ny Lapan'ny tanàna sy ny Lapan'ny kaontin'i Montalbán, fanorenana Renaissance mahavariana miaraka amin'ny fikasihana Plateresque.
Manoro hevitra anao ihany koa izahay mba hitsidika amin'ity tanàna ity ny hermitage Nuestra Señora de la Soledad sy Santísimo Cristo de la Caridad, ny voalohany dia baroque ary ny klasika faharoa; ny masera Franciscan sy ny masera Conceptionista ary ny Ny tilikambon'i Saint Michael, sisa amin'ny fiangonana tranainy iray, izay iray amin'ireo famantarana ny tanàna.
Saingy tokony hitsidika ihany koa ianao, indrindra indrindra, ny Tranombakoka Celestine mba hahatakarana bebe kokoa ny mpanoratra sy ny tontolon'ny fiaraha-monina amin'ity asa lehibe amin'ny taratasintsika ity. Ary koa, miala ao La Puebla, manana ny Tagus Bridge, nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ary, tokony ho valo kilometatra avy eo, dia hahita ny mahavariana Burujon Canyons, fiforonan'ny tanimanga mampahatsiahy anao ny Grand Canyon any Colorado.
Orgaz, iray amin'ireo tanàna tsara tarehy ao Toledo
Castillo de Orgaz, iray amin'ireo tanàna tsara tarehy indrindra ao Toledo
Eo am-pototry ny Sierra de Yébenes sy ao amin'ny faritra Sisla Ho hitanao ity tanàna tsara tarehy ity izay ampidirinay ao amin'ireo tanàna tsara tarehy ao Toledo noho ny lova mahatalanjona ao aminy.
Mba hanombohana ny fitsidihanao an'i Orgas dia azonao atao ny mitsidika ny Majistra Plaza, fa ny fiangonan'i Santo Tomasy Apostol, naorin'ny Alberto de Churriguerra tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo, ary ny Orgas lapa, izay nanomboka tamin'ny XIV ary iray amin'ireo famantarana ny tanàna. Ho gaga ianao amin'ny tilikambon'ny fanomezam-boninahitra, miaraka amin'ny haavo roapolo metatra.
Misy sisa tavela amin’ny manda tranainy ao Orgas sy ny vavahady roa amin’ireo vavahady efatra niampita azy: ny andohalambon'i Belén sy San José. Toy izany koa, manana tetezana ara-tantara maromaro ny tanàna, anisan'izany ny iray ny maso dimy, namboarina tamin'ny fotoan'ny Charles III, ary miaraka amin'ireo hermita maro toa an'i El Socorro sy La Concepción.
Etsy ankilany, ny isa betsaka trano mihaja izay mameno ny arabeny. Ho ohatra, hotanisaintsika ny tranon'ny Count Tierrapilares, ny Calderón de la Barca, Ioseph na ny Vizcaíno. Ary, farany, niavaka i Orgaz sy ny manodidina azy noho ny hasarobidin'ny arkeolojika.
Ohatra amin'izany, dimy kilometatra miala ny tanàna ny distrikan'i Arisgotas, izay hahitanao mahaliana Visigoth Art Museum. Toy izany koa, eo amin'ny havoanan'i La Tocha ianao dia afaka mahita menhir roa izay nanomboka tamin'ny dimanjato taona, in Torrejon misy necropolis romanina ary ao Villaverde afaka mahita sisa tavela amin'ny tetezana sy lalana iray ianao amin'ny vanim-potoana mitovy.
Ocaña sy ny Plaza Ben'ny tanàna tsara tarehy
Ny ben'ny tanànan'i Ocaña mahafinaritra
Any avaratratsinanan'ny faritanin'i Toledo io tanàna mahafinaritra hafa io, manamorona ny sisin-tany Aranjuez, izay, araka ny fantatrao, dia efa an'i Madrid. Ny iray amin'ireo marika ao aminy dia ny maha-zava-dehibe azy Majistra Plaza, naorina tamin'ny taonjato faha-2002 tamin'ny endrika baroque. Nanomboka tamin'ny XNUMX, ankoatra izany, dia mahaliana ny kolontsaina.
Manoro hevitra anao koa izahay hitsidika an'i Ocaña the Loharano lehibe, firavaka Renaissance nataon'i Juan de Herrera tamin'ny taona 1578, ary Lapan'i Cardenas, avy amin'ny vanim-potoana mitovy, fa naorina nanaraka ny kanona ny Gothic, na dia tao anatin'ny tetezamita ho amin'ny Renaissance. Mitovy amin'izao fotoana izao ny Lope de Vega Theater, Kolejin’ny Fikambanan’i Jesosy taloha.
Etsy an-danin’izany, dia tsy latsa-danja amin’ireo tsangambato ara-pivavahana mahatalanjona ao Ocaña. ny fiangonan'i Santa María de la Asunción Izy io dia naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX tamin'ny fomba neoklasika teo amin'ny sisa tavela tamin'ny teo aloha, izay naorina tamin'ny moske taloha. ny fiangonan'i San Juan Bautista efa antitra izy io, satria tamin’ny XIII no nisy azy io, na dia nisy fanavaozana maromaro tatỳ aoriana aza. Na eo aza izany dia tafiditra ao anatin'ny zavakanto Mudejar ao Toledo izy io.
La tilikambo lakolosy an'ny fiangonan'i San Martin Io no singa tokana sisa tavela amin'izany ary nambara fa mahaliana ny kolontsaina. Naorina tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, dia tamin'ny fomba Herrerian. Toy izany koa, Ocaña dia manolotra anao tranobe mahazatra mahafinaritra. Anisan'izany ny an'i Santo Domingo de Guzmán sy Santa Catalina de Siena, samy manana ny fomba Renaissance. Ary, efa eny amin'ny sisin-tany, dia hahita ny Loharano Taloha ianao, angamba tamin'ny andron'ny Romanina.
Farany, manana fakany haisoratra ihany koa i Ocaña. Maty tao an-tanàna i Don Rodrigo Manrique, izay nanokanana ny zanany lahy Coplas hatramin'ny fahafatesan'ny rainy. Ary koa ao amin'ity tanàna ity dia napetraka ny asa malaza Lope de Vega Peribáñez sy ny Komandin'i Ocaña. Toy ny hoe tsy ampy izany, dia teraka tao izy Alonso de Ercilla, mpanoratra an'ny Ny Araucana.
Tranon'ny Tilikambo, ao Tembleque
Any atsinanan'ny faritanin'i Toledo no misy azy io ary dimy amby dimampolo kilometatra avy eo ny renivohiny. Izy io koa dia manolotra anao mahafinaritra Majistra Plaza matetika avy any La Mancha. Miaraka amin'ny drafitra misy rihana efamira, misy portico tohanan'ny tsanganana sy lalantsara eo amin'ny tapany ambony. Naorina teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, dia manana endri-javatra baroque sy haingo hazo sarobidy. Raha ny momba izany, ny fidirana lehibe dia misongadina, voarakotry ny cantilever miaraka amin'ny fomba fijery mipoitra.
Izy io koa dia baroque tamin'ny taonjato faha-XNUMX. trano misy tilikambo, izay nambara ho tsangambato ara-javakanto manan-tantara ary misongadina amin’ny endriny tsara tarehy. Ary avy amin'io vanim-potoana io dia ny Postas na Toby tranainy, na dia henjana kokoa aza.
Amin'ny lafiny iray, ny tsangambato ara-pivavahana lehibe indrindra izay ho hitanao ao Tembleque dia ny fiangonan'ny Lady's of the Assuming. Izy io dia naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary manana endri-javatra tetezamita avy amin'ny Gothic mankany amin'ny Renaissance. Miavaka amin’ny endriny ivelany izy io noho ny tilikambony mijoalajoala ary, raha ny ao anatiny, dia misy trano fiangonana maromaro, anisan’izany ny an’i Jesús Nazareno sy ny Virgen del Rosario.
Ny lova ara-pivavahana ao an-tanànan'i Toledo dia vita amin'ny hermitage La Purísima Concepción, Cristo del Valle, Loreto ary San Antón. Fa ny mahaliana kokoa dia ny avy any Veracruz noho ny endriny octagonal miafara amin'ny dome.
Escalona, ​​​​eo amoron'ny Alberche
Castillo de Escalona, ​​iray amin'ireo tanàna tsara tarehy ao Toledo
Izy io koa dia an'ny La Puebla de Montalban, an'ny faritra Torrijos, na dia eo amoron’ny reniranon’i Alberche aza no misy azy io. Tsy maintsy ho nonenana hatramin’ny andro fahiny izy io, satria hita tao amin’io faritra io ny sisa tavela tamin’ny Celtic, Romana ary Visigoth. Efa tamin'ny Moyen Âge, dia tena zava-dehibe noho ny toerana stratejika.
Raha ny marina, ny mariky ny Escalona lehibe dia ny azy lapa-panjaka, izay nahazo an'io anarana io satria misy ny trano mimanda sy ny lapa Mudejar. Voarakitra an-tsoratra tamin’ny taonjato faha-XNUMX ny fisiany, na dia heverina aza fa fiarovana mafy ho an’ny Romanina aloha izy io. Etsy ankilany, ny fanohizana ny resonance ara-literatiora izay nohazavainay taminareo ary amin'ny maha-anékdota azy dia holazainay aminao fa ao amin'ny rova. ny Zazakely Don Juan Manuel, mpanoratra tamin'ny Moyen Âge izay nandova antsika Manisa Lucanor.
Tokony ho hitanao ao amin'ny toerana ihany koa ny vavahadin'i san miguel, izay misy tilikambo. afa-tsy ny Saint Vincent, dia ireo izay arovana amin'ny manda taloha. Ny fiangonana manan-danja indrindra ao Escalona dia natokana ho an'i San Miguel Arcángel, naorina teo amin'ny tempolin'ny Romanesque taloha. Ao anatiny dia afaka mahita alitara baroque tsara tarehy ianao. Toy izany koa, ny lova ara-pivavahana ao an-tanàna dia vita amin'ny Convent an'ny Conceptionnaux Fransiskanina. Fa Escalona koa dia manolotra anao kianja Castilian mahazatra. Izany dia Don Juan Manuel, izay misy ny trano filankevitra, Tranomboky monisipaly ankehitriny misy tranombakoka kely, ary toeram-pivoriana mahafinaritra.
Etsy ankilany, nahafantatra ny fomba nanavaozana ny tenany ho sehatra zavakanto an-tanàn-dehibe i Escalona mba hisarihana ny fizahantany. Eny amin'ny arabe no ahitanao santionany maro amin'ny asan'ny mpanakanto an-dalambe Mr.Stroke. Ary farany, raha mitsidika ny tanàna amin'ny fahavaratra ianao ary te handro, dia manana a amoron-dranomasin'ny renirano Alberche. Avy eo dia hahita tetezana tsara tarehy tamin'ny taonjato faha-XNUMX ianao.
Ho famaranana, nasehonay anao ny sasany tanàna tsara tarehy any Toledo. Afaka milaza aminareo momba ny maro hafa anefa izahay, satria tena sarobidy io faritany io. Amin'ny maha santionany, dia hanonona anao izahay Oropesa, miaraka amin’ny lapa roa sy ny Tilikambo Famantaranandrony tsara tarehy; manjamaso, miaraka amin’ny Vavahadin’ny Kalifany sy ny Lapan’i La Vela; Ilay Toboso, tanin'ny Dulcinea tsy misy toa azy; rafozam-bavy, miaraka amin'ny rivodoza La Mancha mahazatra azy, na ny tena torrijos, miaraka amin'ny fiangonana kolejy manaitra ao amin'ny Santísimo Sacramento. Heverinao ve fa tsy ampy ny antony hitsidihana ireo tanàna tsara tarehy rehetra ao Toledo ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Tanàna tsara tarehy any Toledo
Tsangambato manan-danja ao Espaina
Inona no hojerena ao Seville ao anatin'ny iray andro